इज्जत र सम्मान पाउँदै वादी महिला
नेपालगञ्ज– वादी समुदायका महिला राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रको विकासका साथै रोजगारमूलक व्यवसायमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ । विगतमा समाजबाट हेपिएका सो समुदाय अहिले सामाजिक विकास र रोजगारमूलक गतिविधिमा संलग्न हुँदै गएपछि समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन भएको छ ।
“नेपाली समाजले पनि वादी समुदायको विगत क्रमशः विर्सदै गएका छन् । समयको कुनै कालखण्डमा बाध्यतामा पारेर शोषणमा पारिएका यो समुदायप्रति अहिले सबैको सकारात्मक लगाव छ । वादीहरुले पनि अव आप्mनो विगत विर्सिएर सभ्यसमाज निर्माणमा योगदान दिन सक्छन्”, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश नं. ५ का प्रमुख भोला महतले भने।
प्रमुख महतले भने,“विगत सम्झेर अव वादी समुदाय रुने हैन, वर्तमानमा रमाउँदै राम्रो भविष्य खोज्ने हो ।” नीरज गौतम
राष्ट्रिय सभाको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको दोस्रो बैठकले सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रि...
भूमि ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक पारित : भूमिहीनलाई जग्गाको लालपूर्जा, हदबन्दीमा गोलमाल !
नासाले चन्द्रमामा दोस्रोपटक अन्तरिक्षयात्री अबको पाँच वर्षमा पठाउने